Gudoomiyaha Mucaaradka SH Sharif : Mucaaradka dulqaadkii wuu ka dhamaadey – MANABOLYO NEWS
Gudoomiyaha Mucaaradka SH Sharif ayaa sheegey in ay wax waliba oo nabada keeni kara waa sameeynay waxaan u dulqaadanay Madaxweynihii hore Farmaajo oo weli amraya ciidamadii aan anaga soo dhisnay taasna waxy keeneeysaa in ciidanka u kala jabo laba dhinac waana tan uu doonaayo Farmaajo kadibna diyaarada ka raaco.
Waxaan isku daynay in R/Wasaaraha oo inoo yimid si wanaagsan usoo dhaweeynay isla markaasna wax badan isla meel dhignay balse waxa hishiiskaasi burburiyey waa Madaxweynihii hore Farmaajo oo mar waliba carqad ku ahaa Siyaasad nabadeed, halka uu asaga doonayo in uu wadankaan foodo ka sameeyo.
Shirkii ugu dambeeyey ee aan la yeelaney R/Wasaare Rooble waxa uu ahaa mid Farmaajo hagaayey afkana ku shubtey R/Wasaare Rooble iyo ragii la socdey,
Shir wuxuu ahaa saacado badan socdey ilaa aroortii subax balse uu noqdey mid laado Farmaajo taasna waa mid u taal labada Hogaamiye Farmaajo iyo Rooble.
Hadaba waxaa baajiney Banaanbihii berito anagoo u sheegney Taageerayaasheena in ay naga warsugaan ugana baaqney in ay diyaar garoow xoog leh laga doonayo si loo jiiro kali taliyaha Farmaajo sidii ay horey u dhacdey oo kale .
Magaaladan waa wey tagaan in hadii loo yimaado dadka degan masiirkooda ay dagaalamayaan, horey ayey u dhacdey sanadkii 1991 dii iyo 2006.
Dhanka kale waxaa aad u socdo olole dagaal iyadoo la arkayey Askarkii dowlada oo u kala safan laba qeybood oo kala ah Mucaarad iyo Dowladii hore iyadoo qeylo dhaan u dirteeyn dadka kala taageersan labada dhinac ee uu kala gogaaminayaan Farmaajo iyo Shekh Shariif.
R/Wasaarigii hore Kheyre oo hadley boqolaal taageerihiisa ah
Faah faahin qaraxii caawa ka dhacey Muqdisho